'असभ्य भाषा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन': करिश्मा
एयरपोर्टमा आफूलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भनि प्रहरीलाई गाली गर्दै फेसबुक लाइभ गरेपछि गायिका आस्था राउत विवादमा परिरहेकी छिन् । यसैबिच प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । आस्थाको विषयलाई लिएर साधारण मानिसदेखि सेलिब्रिटीले टिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिले उनको समर्थन गरिरहेका छन् भने कतिले उनलाई गलत भनि रहेका छन् । यसै विषयमा नायिका करिश्मा मानन्धरले पनि एक स्टाटस लेखेकी छिन् । उनले असभ्य भाषा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएकी छिन् । यो अनुभव आफूले भोगेर वाक्क भइसकेको पनि उनले लेखेकी छिन् ।
उनले अनुप भट्टराईले गरेको पोस्ट साझेदारी गर्दै आफ्नो विचार राखेकी हुन् । उनि भन्छिन्,
'यो भनाइलाई टेकेर बोलेँ ! असभ्य भाषा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन । पुलिस पनि नेपाली मानिस हुन। दिनभरि दिक्क लाग्ने कामले वाक्क छन् होला ! तर भाषाको प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्‍याउनु होला ! बिचरा गायिकाजीको नयाँ अनुभव भएछ । यो त हामीले सहेर उनीहरूलाई नै व्वाक्क परेको चिज हो ।
भाषाको साथसाथै सुधार्नु पर्ने केही उदाहरण
ट्राफिकले इन्टर सेक्सनमा कसको अधिकार पहिलो हुन्छ ? मुख्य सडकको पहिलो अधिकार हुन्छ । अनि हाम्रोजस्तो गल्ली गल्ली भयेको ठाउँमा पहिलो प्राथमिकता मूल बाटोको सवारी साधनको हुन्छ , त्यो थाहा छैन ! ! गल्लीको टुप्पोमा राख्नुस् लेखेर ´ पुरै रोक्नुस्, हेर्नुस् अनि ,जानुस् ` । अर्को नियम कमसेकम १०० मी . थाहा हुनुपर्छ इन्डिकेसन कता जानी भनेर त्यो खोइ ?
यति सामान्य नियम थाहा छैन तपाईँहरूलाई ? ?
अनि होला आवेगमा आस्थाले केही त्रुटि बोल्ने समयमा गरिन होला ! तर के नेपाल पुलिस बाट 'तँ' नखाने कोही छौ ? त्यो पनि बिना कारण ? हामी त यो कामको स्ट्रेस हो भनेर हाँसेर छोडिदिन्छौ तर अब केटाकेटीले रीयाक्ट गरिन त्यहि हो ।'